विशेष समितिको बैठक निष्कर्शविहीन बैठक पुनः भोली बस्दै
काठमाडौं,चैत १९। आज विहान सचिवालयको कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकमा लडाकु रेखदेख तथा पुनःस्थापनासम्वन्धि सेना समायोजन विशेष समितिको बैठक निष्कर्शविहीन भएको छ । अबको
संघीयतासहितको संविधान नभए जनताद्धारा खारेज हुने : केसी
काठमाडौं,चैत १९। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संघीयतासहितको संविधान जारी भए त्यसलाई नेपाली जनताले खारेज गर्ने बताएका छन् । संघीयताकै कारणले १४ जेठमा जारी हुने संविधान निर्माण
दुई बालिकाको जलेर मृत्यु
चौतारा, चैत १९। सिन्धुपाल्चोकको लिसङ्खु गाविस ९ का एक छिमेकीको गोठमा आगलागी हुँदा दुई बालिकाको जलेर मृत्यु भएको छ । आगलागीमा प्रेम दोर्जे तामाङका छोरीहरु ११
बेलायती सेनाका च्यापल आज नेपाल आउदै
काठमाडौं,चैत १९। बेलायती सेनाका फिल्ड मार्सल सर जोन च्यापल आज नेपाल खाउदैछन् । वातावरण र समुदायका लागि दिगो शिक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुन उनी नेपाल आउन लागेको बेलायती
Date : 30 Mar 2012
सेना समायोजन कार्ययोजनाको टुंगो लगाउन विशेष समितिको बैठक आज बस्दै
काठमाडौं,चैत १७। सेना समायोजन कार्ययोजनाको टुंगो लगाउन आज माओवादी सेनाका लडाकुको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापनासम्बन्धी विशेष समितिको बैठक बस्दैछ । विशेष समितिअन्तर्गतको सचिवालयले लिखित रुपमै पेश गरेको
रिपोर्टर्स क्लव आजदेखि १४ वर्ष प्रवेश
काठमाडौं,चैत १७। रिपोर्टर्स क्लव नेपालले आफ्नो आजदेखि १४ वर्ष प्रवेश गरेको छ । क्लवले आफ्नो १४ औं वाषिर्कोत्सव आज मनाउँदैछ । वाषिर्कोत्सवको अवसरमा क्लवले दिउँसो
जीप दुर्घटना हुँदा ७ को मृत्यु ६ जना गम्भीर घाइते
सल्यान,चैत १७। सल्यानको श्रीनगरबाट खैरावाङ भगवती मन्दिरतर्फ जाँदै गरेको ग १ च २७७० नम्बरको जीप खलङगा गाविस चिउनेटामा दुर्घटना हुँदा ७ जनाको मृत्यु भएको छ । १७
शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन कार्य जेठ १४ मै सकिने : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं,चैत १७। शुक्रवार विहान आफ्नै निवासमा लाजिम्पाटमा नेपालका लागि अष्टे्रलियाका राजदूत शुसन ग्रेससंग भएको भेटवार्तामा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति प्रक्रिया र संविधान
बेपत्ता छानविन र सत्य निरुपण आयोग गठन गर्न तीन दल चार बर्षपछि बल्ल सहमत
काठमाडैं,चैत १७। प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको आब्हानमा आज बसेको तीन दलका शिर्ष नेताहरुको बैठकमा सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग गठन गर्ने बारेमा दलवीच सहमति
Date : 28 Mar 2012
सरकारले यो वर्षबाट बैशाख ११ को विदा कटायो
काठमाडौं,चैत १५। २०६२/६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धि स्वरूप सरकारले हरेक वर्ष बैशाख ११ गते सार्वजनिक विदा दिँदै आएको थियो । तर सरकारले आउँदो यो बैशाख ११ गते
भक्तपुर, चैत १५। महानगरीय प्रहरी भक्तपुर र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट गएको टोलीले चितुवाको छाला सहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा काभ्रेपलाञ्चोकका ४२ वर्षका
पेट्रोलिय पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धिविरुद्ध विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा
काठमाडौं,चैत १५। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलिय पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धिविरुद्ध विद्यार्थीले आन्दोलन गर्ने भएका छन् । १३ विद्यार्थी संगठनसँग यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको, राज्य
फेरि गयो पूर्वमा भुकम्प, तीन वटा घरमा क्षति
काठमाडौं,चैत १५। पुर्वी नेपालको भारतीय सीमानालाई केन्द्रविन्दु बनाएर आज विहान पूर्वमा भुकम्प गएको छ । विहान ५ बजेर २७ मिनेटको समयमा ५ दशमलब २ रेक्टर
विवाद मिलाउनको लागी शिर्षदलका नेताहरु बैठक बस्दै
काठमाडौं, चैत १५। भावी संबिधानका महत्वपूर्ण बिषयमा दलहरुवीच देखिएका बिबाद समाधान गर्न संवैधानिक समिति अन्तर्गतको विवाद समाधान उपसमितिको बैठक आज बस्दैछ । आज दिउँसो तीन बजे सिंहदरबारमा बस्ने
माओवादी सभासद् पुलामीको परीक्षा दिने परिक्षार्थी पक्राउ
रौतहट, चैत १५। रौतहटको श्री उच्च माद्यामिक विद्यालय, जुडिबेला परीक्षा केन्द्रबाट सभासद् प्रेमबहादुर पुलामीको परीक्षा दिने नक्कली परिक्षार्थी पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा मकवानपुरका सहित्य
बालबालिका बेचविखन गर्ने गिरोह पक्राउ
नुवाकोट, चैत १५। नुवाकोटबाट बालबालिका बेचविखन गर्ने गिरोहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेकोछ । नुवाकोटको शिखरबेसी घर भएका १० र ११ बर्षीया बालिकालाई भारततर्फ बेच्न लैजादै गर्दा
रुकुम,चैत १३। एसएलसी परीक्षा चलिरहेको बेला रुकुमको बाँफीकोट केन्द्रबाट एक नक्कली परिक्षार्थी आज पक्राउ परेको छ । तेजेन्द्र कुसारीको नाममा परीक्षा दिइरहेका दलबहादुर बुढालाई पक्राउ गरिएको
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डा. आयर्स नेपाल आउदै
काठमाडौं,चैत १२। दक्षिण तथा मध्यएसियाका लागि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डा. अलिसा आयर्स भोलि नेपाल आउँने भएका छन् । आयर्सले नेपालमा शान्ति प्रक्रिया तथा संविधान निर्माणबारे जानकारी
युवा सभासद्हरूद्धारा प्रधानमन्त्री भट्टराई र संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्बाङलाई भेट्ने
काठमाडौं,चैत १२। युवा सभासद्हरूको दबाब समूहले आज दिउँसो प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई र संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङलाई भेट्ने भएको छ । भेटमा शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया
प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा उपस्थित आदेश
काठमाडौं,चैत १२। प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई आज संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा उपस्थित हुने भएका छन् ।प्रधानमन्त्री भट्टराई आइतबार विहान ८ बजे समितिको कार्यालय सिंहदरवारमा उपस्थित हुने
काठमाडौं,चैत १२। संविधानसभाको बैठक आज संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा दिउँसो तीन बजे बोलाइएको छ । बैठकमा राज्य पुनर्संरचना सुझाव आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन संविधानसभामा औपचारिक रुपमा पेश
संविधानसभाको बैठक १२ गते बस्ने
काठमाडौं,चैत ९। प्रमुख दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले १२ गते संविधानसभाको बैठक बोलाएको छ । पछिल्लो पटक संविधानसभाको बैठक फागुन १ गते संविधान निर्माणको
नागरिकता पाउने प्रावधान कडाई गर्नुपर्ने : नेकपा एमाले नेता नेपाल
काठमाडौं,चैत ९। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले विदेशीले नेपाली नागरिकता पाउने प्रावधान कडाई गर्नुपर्ने बताएका छन् । महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालको नागरिकतासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेता
विश्व पानी दिवस नेपालमा पनि मनाईदै
काठमाडौं,चैत ९। आज विश्व पानी दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईंदैछ । सरकारले विश्व पानी दिवसका अवसरमा आजदेखि पानी सप्ताह मनाउँदैछ । जस अन्तर्गत पानी सम्बन्धी
एमाले अध्यक्ष खनाल आज भारत जादै
काठमाडौं,चैत ९। एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल आज भारत जाने कार्यक्रम रहेको बताएका छन् । खनाल स्वास्थ्य उपचारका लागि भारतको नयाँ दिल्ली जान लागेको
इटहरीमा रहेका ७ वटा मेनपावरमा सरकारद्धारा तालाबन्दी
सुनसरी, चैत ९। तोकिएको म्यादभित्र पनि धरौटी बापतको रकम बुझाउन नसकेपछि सुनसरीको इटहरीमा रहेका ७ वटा मेनपावरमा सरकारले तालाबन्दी गरेको छ । बैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौंले अनुगमनलाई
Date : 21 Mar 2012
काठमाडौं, चैत ८ । आज बिहान भएका सवारी दुर्घटनामा ६ जनाको मृत्यु भएको छ । सप्तरी, भक्तपुर, सुनसरी र ताप्लेजुङमा भएका दुर्घटनामा ती ६ जनाको मृत्यु
एसएलसी दिने विद्यार्थीको मोटरसाईकल दुर्घटनामा ज्यान गयो
भक्तपुर ८ चैत । एसएलसी परीक्षा दिन मोटरसाईकलमा गएका दुईजना विद्यार्थीको दुर्घटनामा परी ज्यान गएको छ । बुधवार विहान बा ४८ प ७१७ नम्बरको मोटरसाईकलमा भक्तपुरको
घाँटी रेटी कारागार भित्रै आत्महत्या
उदयपुर चैत ८ । उदयपुर कारागारमा रहेका श्याम परियारले बुधवार घाँटी रेटी आत्महत्या गरेका छन् । परियारले कारागारको चर्पीमा गएर बाँसको मुढा बनाउन प्रयोग गर्ने चक्कुले
आजदेखि लागु हुने गरी सार्वजनिक यातायातको भाडा बढयो
काठमाडौं,चैत ७। सरकारले आजदेखि लागु हुने गरी सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाएको छ । यातायात ब्यवस्था विभागले आज सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी पेट्रोलियम पदार्थको बढेको मूल्य अनुसार सार्वजनिक
Pages 132 : You are at page 78 of 132